यी ३ राशि भएका पुरुषहरु सजिलै पर्छन् युवतीको नजरमा ! – Butwal Sandesh
यी ३ राशि भएका पुरुषहरु सजिलै पर्छन् युवतीको नजरमा !
जीवन बिताउन सबैलाई जीवन साथि चाइने गर्छ। अझ भन्ने हो भने दुख र सुख साट्नको लागि प्रेमी अथवा जीवन साथि अपरिहार्यनै मान्ने गरिन्छ। केटा मान्छेले भन्दा पनि प्रेमको विषयमा केटिहरुले धेरै सोच्ने गर्छन् साथै संयमता अपनाउने गर्छन्। हरेक युवतीहरुको आफ्नो जीवन साथीको बारेमा भिन्न प्रकारको सोच हुने गर्छ। आफुलाई माया गर्ने साथै सुखी राख्ने जीवन साथि परोस् भन्ने हरेक युवतीहरुको चाहना रहेको हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार निम्न उल्लेखित राशि भएका पुरुषहरु प्रति महिलाहरु आकर्षित हुने गर्छन्।
यस राशि भएका पुरुषहरु आकर्षक हुनुका साथै वफादार पनि हुने गर्छन्। आफ्नो प्रेमिकालाई खुशी बनाउने हरेक प्रकारको तरिका अपनाउन पछि नहट्ने भएका कारण सिंह राशि प्रति युवतीहरु मरिहत्ते गर्ने गर्छन्। आफ्नो प्रेमिकालाई हरेक प्रकारको सुख दिनको लागि जुनै पनि हद सम्मको दुख गर्न पछि नहट्ने साथै आफ्नो प्रेमिकालाई मुटु सम्झने यस राशि भएका पुरुषहरुको खासियत रहेको हुन्छ।
यस राशि भएका पुरुषहरुको स्वभाव खुशमिजाज हुने गर्छ भने सानो-सानो कुरामा पनि खुशी हुने गर्छन्। साथै अआफ्नो प्रेमीलाई पनि खुशी बनाउने धेरै तरिका लगाउने गर्छन्। बोलिबाट मात्र नभई व्यवहारबाट पनि सफा हुने हुँदा युवतीहरुको रोजाइमा सजिलै पर्ने गर्छन्। व्यक्तित्व पनि आकर्षक हुने हुँदा मकर राशि भएका पुरुषहरु युवतीहरुको रोजाईमा सजिलै पर्ने गर्छन्।
यस राशि भएका पुरुषहरु केही हदसम्म भावुक रहने गर्छन् भने आफ्नो प्रेमीको गरे भवनको कदर पनि गर्ने गर्छन्। आफ्नो प्रेमिकालाई कुनै पनि प्रकारको दुख नहोस् भन्ने सोच्ने हुँदा दुख आफुनै गर्ने मनसाय बनाउने गर्छन्। साथै यस राशि भएका पुरुषहरु आफ्नो प्रेमिकाको गल्ति सजिलै माफ गर्ने खुवी रहेको हुन्छ।